Musharraxiintii ugu dambeysay oo maanta u qudbeeneysa Golaha Wakiillada KGS – Kalfadhi
Maalintii labaad ayey socotaa dhageysiga qudbadaha Musharraxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), waxaana musharraxiinta maanta leh hadal-jeedinta ay yihiin laba musharrax oo kaliya. Waxaa ka mid Cabdicasiis Lafta Gareen, oo ay siyaasiyiin badan rumeysan yihiin iney Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) taageereyso. Waxa uu xilkiisii Wasiirnimo isaga casilay inuu xilka Madaxweynaha KGS u tartamo darteed.
Xildhibaan Aadan Wardheere, oo ah xubin ka tirsan Guddiga Doorashada KGS, ayaa u sheegay Kalfadhi iney shalay saddex musharrax u qudbeysay Golaha Wakiilada KGS, si ay ugu soo bandhigaan barnaamijkooda xukumadda ay soo dhisi doonaan, labada musharrax ee harsanna ay maanta Golaha isu sharraxayaan.
Hase ahaatee, waxaa fursaddaas weynaya Musharrax Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo, isagoo haysta shahaadadiisa Guddiga Doorashada KGS ay ugu ogolaadeen tartanka, ay DFS xirtay. “Musharrax Mukhtaar Roobow haddii uu yimaado Talaado ama Arbaco, oo la soo xaliyo, haddii uu diyaar yahay doorashada waa uu ka qeybgalaa, haddii ay dhici weysana ma aqaan sidey noqoneyso” ayuu yiri Wardheere.
Xildhibaan Aadan Wardheere waxa uu sheegay in dhageysigooda barnaamijyada siyaasadeed ee musharraxiintii shalay ay si fiican ugu soo dhamaatay, maantana ay sidaas oo kale ka rajo qabaan. “Dhamaan Koofur Galbeed waxay qaaday in qalalaasaha jira looga gudbi karo in dowlad la helo” ayuu yiri Xildhibaan Wardheer. Waxa uu markaas adkeynayey iney Doorashadu ku dhici doonto waqtigeeda.
Qore: Nuur Cali Faarax